पाठको साथ छविहरू कसरी बनाउने | अनलाइन क्रिएटिभहरू
एक छवि, आफैले, पहिले नै धेरै भन्छ। तर यदि तपाइँ यसलाई एक शब्द, वा वाक्यांशको साथ पनि साथ दिनुहुन्छ भने, यसले धेरै अर्थ बनाउन सक्छ। यद्यपि, धेरैले विचार गर्छन् कि, यदि तपाईं डिजाइनर हुनुहुन्न भने, त्यो धेरै जटिल छ, र सत्य यो हो कि वास्तविकताबाट केहि पनि अगाडि छैन। आज, पाठको साथ छविहरू कसरी सिर्जना गर्ने भनेर जान्न धेरै सजिलो छ र त्यहाँ धेरै निःशुल्क उपकरणहरू छन् जसले तपाईंलाई त्यसो गर्न अनुमति दिन्छ, सामाजिक सञ्जालहरू समेत।
तर तपाईं यसलाई कसरी गर्नुहुन्छ? के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? यदि तपाईंसँग धेरै तस्बिरहरू छन् जसमा तपाईं पाठ थप्न चाहनुहुन्छ तर तपाईंले यसको बारेमा कहिल्यै सोच्नुभएको छैन किनभने तपाईंले सोच्नुभएको थियो कि यो गाह्रो थियो, अब तपाईंले देख्नुहुनेछ कि यो तपाईंले सोच्न सक्नुभन्दा सजिलो छ।
1 छविमा पाठ किन राख्नुहोस्?
2 पाठ संग छविहरू सिर्जना गर्न कार्यक्रम
2.1 तपाइँको कम्प्युटर मा स्थापित कार्यक्रम
2.2 प्रकाशकको ​​रूपमा सामाजिक सञ्जाल
2.3 वेबसाइटहरू र अनलाइन कार्यक्रमहरू पाठको साथ छविहरू सिर्जना गर्न
2.3.2 यो पढ्नुहोस्
छविमा पाठ किन राख्नुहोस्?
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईसँग ती फराकिलो आँखाले माथि हेरिरहेको बिरालोको छवि छ। सबैभन्दा सामान्य कुरा यो हो कि तपाइँ छविमा हेर्नुहुन्छ र अन्तमा तपाइँ मुस्कुराउनुहुन्छ। तर पक्कै पनि यसले तपाइँलाई तपाइँको दिन प्रति दिन केहि सम्झना गराउँदछ। सायद सानो अनुहारमा जुन तपाईंका बच्चाहरूले केही चाहन्छन्।
सायद तपाईले त्यो बिरालोले शब्दहरू भन्नको लागि अपेक्षा गर्नुहुन्छ जुन तपाईलाई त्यो अर्को व्यक्ति (वा चलचित्र) को सम्झना गराएको छ। तर निस्सन्देह, यो एक छवि हो ... यो आफैमा उल्लेखनीय छ, तर यसमा एक पाठ राखेर तपाईले के गर्नुहुन्छ सन्देशलाई थप जोड दिनुहोस् र, अर्कोतर्फ, तपाईंले यसलाई हेर्ने जो कोहीले के सोचोस् भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दै हुनुहुन्छ (यस अवस्थामा, यसलाई हेर्ने प्रत्येक व्यक्तिको फरक विचार हुन सक्छ)।
छविहरूमा पाठ राख्नु सामान्य छ, उदाहरणका लागि, मेम्स बनाउन (खेलकुद, सेलिब्रेटीहरू, इत्यादि) जहाँ प्रत्येकले आफ्नो संस्करण र फोटोको व्याख्या दिन्छ (यसैले गर्दा तपाईले विभिन्न पदहरू सहित धेरै फेला पार्नु हुन्छ)।
र यो गर्न गाह्रो छ? धेरै कम छैन! यो वास्तवमा गर्न धेरै सजिलो छ र तपाइँसँग यो गर्न डिजाइन ज्ञान पनि आवश्यक छैन।
पाठ संग छविहरू सिर्जना गर्न कार्यक्रम
आजकल तपाईंसँग धेरै कार्यक्रमहरू छन् जसले तपाईंलाई सेकेन्डको कुरामा पाठहरूसँग छविहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। के तपाइँ हामी तपाइँलाई केहि उदाहरण दिन चाहनुहुन्छ?
तपाइँको कम्प्युटर मा स्थापित कार्यक्रम
हामी ती प्रोग्रामहरूसँग सुरु गर्छौं जसलाई काम गर्न स्थापना आवश्यक पर्दछ। तिनीहरूको फाइदा छ कि फोटोहरू इन्टरनेटमा अपलोड गर्नुपर्दैन। र यो हो कि, यदि तिनीहरू निजी फोटोहरू हुन् वा तपाइँ तिनीहरूलाई नियन्त्रण नगरी नेटवर्कमा फैलाउन चाहनुहुन्न भने, यो विकल्प राम्रो छ।
यस अवस्थामा हामी सक्छौं Photoshop, GIMP वा कुनै छवि सम्पादक सिफारिस गर्नुहोस्। ती सबैसँग छविमा पाठ थप्ने कार्य छ र तपाइँ फन्ट प्रकार, फन्ट रङ, साइज, आदि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अक्षरहरूसँग फरक प्रभावहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ वा स्थिर छविहरूको सट्टा एनिमेटेड gif सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
तिनीहरूको एक कमजोरी छ, र त्यो हो, जसरी तिनीहरू तपाईंको तस्बिरहरू सुरक्षित राख्नको लागि राम्रो छन्, तिनीहरू प्रयोग गर्न केही हदसम्म जटिल छन् यदि तपाईंले यी उपकरणहरू पहिले प्रयोग गर्नुभएको छैन भने।, जसले तपाईंलाई अभिभूत बनाउन सक्छ र यसलाई जारी राख्न चाहँदैन। यो पूर्णतया सामान्य कुरा हो, तर YouTube ट्यूटोरियलको साथ तपाइँ निश्चित रूपमा यसलाई बाहिर निकाल्न सक्षम हुनुहुनेछ किनभने यो पाठ थप्न गाह्रो छैन। यदि तपाइँ विशेष प्रभावहरू थप्न वा धेरै विस्तृत फन्ट प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने अर्को कुरा हुनेछ। तर केही वाक्यांशहरू र सायद तिनीहरूलाई स्पष्ट बनाउनको लागि छायाँ राख्नु बाहेक, तपाईंलाई बाँकीसँग धेरै समस्या हुनेछैन।
प्रकाशकको ​​रूपमा सामाजिक सञ्जाल
फेसबुक जस्ता धेरै सामाजिक सञ्जालहरूमा छवि सम्पादन गर्ने कार्य छ र तपाइँ आइकनहरू, इमोजीहरू, साथै पाठ थप्न सक्नुहुन्छ। निस्सन्देह, यसले तपाईंलाई धेरै विकल्पहरू दिनेछैन, किनकि यो धेरै सीमित छ, तर चाल गर्न यो खराब छैन।
यद्यपि, यो एक निश्चित तरिकामा पाठ राख्न को लागी आउँदछ जब तपाईंसँग धेरै सीमितताहरू छन् भन्ने तथ्यको कारण यो प्रयोग गर्नको लागि उत्तम विकल्पहरू मध्ये एक होइन।
वेबसाइटहरू र अनलाइन कार्यक्रमहरू पाठको साथ छविहरू सिर्जना गर्न
यदि तपाईं आफ्नो टाउकोलाई तातो बनाउन चाहनुहुन्न र केही मिनेटमा वाक्यांशहरूसँग छविहरू बनाउन चाहनुहुन्न भने, त्यसपछि धेरै समय बचत गर्ने अनलाइन उपकरणहरू र अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ।
हामीले सिफारिस गर्न सक्ने ती मध्ये निम्न हुन्:
यो एक पृष्ठ हो जहाँ, यसलाई प्रयोग गर्न, तपाईंले दर्ता गर्नुपर्नेछ, तर यसको छविहरूको सूचीको लागि यो यसको लायक छ (तिनीहरू सबै नि:शुल्क छन् ताकि तपाइँ प्रतिलिपि अधिकार समस्याहरूबाट बच्न सक्नुहुन्छ, र 17 विभिन्न प्रकारका अक्षरहरू पनि। यसले तपाइँलाई जहाँ चाहानुहुन्छ तिनीहरूलाई राख्न अनुमति दिन्छ, तिनीहरू ठूला वा सानो छन्, र तिनीहरू फोटोसँग मेल खान्छ। तपाइँ थप के माग्न सक्नुहुन्छ?
यस अवस्थामा यो उपकरण हो अधिक सीमित हुनाले तपाईले गर्नुपर्ने भनेको वाक्यांश राख्नु हो, तपाईले चाहानु भएको, र तल यसले तपाईलाई धेरै विकल्पहरू प्रदान गर्दछ। (एकअर्काबाट धेरै फरक) ताकि तपाईं ती प्रत्येकमा कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ।
निस्सन्देह, यो केवल केहि छविहरूमा सीमित छ, जसको मतलब यो हो कि, यदि तपाईंले ती सबै खर्च गर्नुभयो भने, यो पृष्ठले तपाईंलाई सेवा दिनेछैन।
यस अवस्थामा तपाईले नि: शुल्क संस्करण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईले दर्ता गर्नुपर्दैन र तपाईले गर्नु पर्ने मात्र हो एउटा छवि अपलोड गर्नुहोस् र यसलाई आफ्नो मनपर्ने संग गडबड सुरु गर्नुहोस्। जब तपाइँ समाप्त गर्नुहुन्छ, तपाइँसँग तपाइँको निपटानमा धेरै फन्टहरू छन् ताकि तपाइँ त्यो छविको लागि उपयुक्त वाक्यांश राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए, यद्यपि यसले अन्य पृष्ठहरूको तुलनामा थोरै समय लिनेछ, यो लगभग तपाइँले स्क्र्याचबाट बनाइएको डिजाइन हुनेछ (यो छवि सम्पादन कार्यक्रम जस्तो छ तर सरल छ)।
र छवि सम्पादन कार्यक्रमहरूको कुरा गर्दा, तपाईंसँग Pixir छ, हल्का वा पूर्ण संस्करणमा। दुवै नि: शुल्क छन् र पूर्ण एक फोटोशप जस्तै कार्य गर्दछ। तर यदि तपाईंसँग धेरै सीप छैन भने, हामी हल्का संस्करण सिफारिस गर्छौं।
तपाईंसँग छ नि: शुल्क छविहरू र छनौट गर्न धेरै फन्टहरू त्यो वाक्यांश को लागी तपाईले राख्न चाहानुहुन्छ। साथै, तपाईं फन्ट साइज, रङहरू, यसलाई झुकाव र अन्य धेरै आकारहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने कम्तिमा 50 विकल्पहरू छनौट गर्न, क्रोमेटिक सम्भावनाहरू र ध्यानको लागि केही कलहरू (जस्तै पहिलो अक्षर प्रतिमा जस्तो देखिन्छ), त्यसपछि तपाईंले यो उपकरण प्रयास गर्नुपर्छ।
तपाईले गर्नु पर्ने भनेको डिजाइनको बारेमा निर्णय गर्नु हो र त्यो हो, वास्तवमा तपाईले छविहरूको बारेमा सोच्नु पनि पर्दैन।
यसमा केवल एउटा कमजोरी छ र त्यो हो, यसलाई प्रयोग गर्न, तपाईंले दर्ता गर्न आवश्यक छ।
तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, पाठको साथ छविहरू सिर्जना गर्न धेरै विकल्पहरू छन्। तपाइँ सामान्यतया यो कसरी गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » प्रेरणा » पाठको साथ छविहरू कसरी सिर्जना गर्ने
आइसोटाइपहरू: तिनीहरू के हुन् र उदाहरणहरू